Archive du 15-nov-2021
Fifanandrinana politika Nifamela i Roland Ratsiraka sy Ravalomanana
Niova ny sary politika! Nifamela ampahibemaso, nifandray tànana, ary naneho ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana Filoham-pirenena sy ny Depiote Roland Ratsiraka
Maro ny zava-niseho nandritry ny herinandro lasa teo ary isan’ny nisongadina namarana izany ny teo amin’ny tontolo politika.
Faribolana Sandratra Hanao antsa fanairana ny mpandoro tanindrazana
Hanao antsa fanairana ny mpandoro tanindrazana etsy amin’ny Ivokolo Analakely ny zoma 19 novambra izao ireo poeta mivondrona ao anatin’ny fikambanana Faribolana Sandratra.
Mandritsara Maty teo am-panaovana EPS ilay mpianatra
Mpianatra iray ny zoma lasa teo no maty teo am-panaovana ny fanatanjahantena an-tsekoly EPS tany Mandritsara. Rakotoson Jean Luc no anarany, tovolahy vao 17 taona monja,
Mahamasina Nanondrana indray ny mpijery baolina
Nisehoana toe-javatra mahamenatra indray tetsy amin’ny Kianjan’i Mahamasina omaly, taorian’ny lalaon’ny Barean’i Madagasikara sy ny Tafa Stars Tanzanianina.
Olona miditra eto Madagasikara Hentitra ny fanaraha-maso ny fahasalaman’ireo mpandeha
Nidina teny amin'ny Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ny sabotsy lasa teo ny Delegasiona avy eo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka izay notarihan' nyMinisitra
Rugby vehivavy, divizionina faharoa Nampiseho hery ny oniversiten’Antananarivo
Nampiseho hery ny oniversiten’Antananarivo na ASUT ny sabotsy teo nandritry ny fiadiana izay ho tompondakan’i Madagasikara teo amin’ny taranja Rugby, sokajy vehivavy, divizionina faharoa.
Ambatondrazaka Nisy namono ilay ramatoa be avy naka “pension”
Efa tena miharatsy ny fiainana. Ramatoabe 71 taona avy naka vola fisotroan-dronono no fantatra fa nisy namono tao an-tokantranony tao amin’ny Fokontany,Tanambao distrikan’Ambatondrazaka.
Barean’i Madagasikara Ahafahana manatsara sy maka lesona ny vita
Nisaraka ady sahala 1-1 ny Barean’I Madagasikara sy ny Taifa Stars Tanzanianina omaly tetsy amin’ny kianja Barea Mahamasina,
Marc Ravalomanana “Tsy ampahafirin’ny mafy io, tsy matahotra azy aho”
Tsy nitsitsy fitenenana i Marc Ravalomanana ny sabotsy 13 novambra naneho ny tsy fihetezana sy ny lesoka maro amin’ny fitantanana ny firenena, miaraka amin’ny kajikajy politika.
Tontolon’ny zavakanto Mpanakanto roa no indray namoy ny ainy
Misaona tanteraka ny tontolon’ny zavakanto ny faran’ny herinandro teo. Mpanankato roam antsy no indray nindaosin’ny fahafatesana.
Antsirabe sy Fianarantsoa Nirotsaka ny orana
Velom-bolo ireo mponin’Antsirabe sy Fianarantsoa rehefa nirotsaka ny orana tany an-toerana ny faran’ny herinandro teo.
Avaradoha Nosamboritra ireo roalahy nitondra entana mampiahiahy
Lehilahy miisa roa 33 sy 49 taona no saron’ ny Polisy miasa ao teny Avaradoha ny faran’ny herinandro teo nanosika poussette feno korontan'entana nampiahiahy. Nandritra ny.
Coronavirus Efa miparitaka indray fa hafenimpenina ?
Manomboka hafahafa indray ny toe-draharaha ara-pahasalamana eto amin’ny tany sy ny firenena amin’izao fotoana izao, indrindra taorian’ny herinandro mahery nisokafan’ny sisin-tanin’i Madagasikara.
Roland Ratsiraka “Tsy mbola nisy Filoha mpandainga ohatran’io teto…”
Nanomboka 1998 aho no nanao politika, nirotsaka depiote tao Toamasina, fa mbola tsy nahita aho hoe: nisy grevy toy izao na iza na iza no nitondra, taminao nitondra tsy nahita grevy toa io aho, hoy izy mantsy an’I Marc Ravalomanana, fa izao isan-kerinandro.
Cenam 67 ha Tratra niaraka tamin’ny antsy maranitra ilay mpanendaka
Lehilahy iray 22 taona voalaza fa mpanendaka no tratran’ny polisin’ny SAG Anosy niaraka tamin’ny antsy maraina omaly 14 novambra tokony ho tamin'ny 02 ora sy sasany tolakandro teny amin'ny CENAM 67 ha.
Lalam-baovao Tsarasaotra Ivato Ritra ny reniranon'i Laniera
Maina ny tany. Izay no azo amehezana ny zava-misy miha mipaka manerana an’I Madagasikara amin’izao fotoana izao.
Andranonahoatra Efa tsy fanao ianao intsony lalana
Fahasimban’ny fiara, fitohanan’ny fifamoivoizana, fahatarana, loza…ireo no ateraky ny fahasimban’ny lalana, tahaka ny hita eny Andranonahoatra – Itaosy.Nivadika ho lavaka ny lalana eo amin’ny “4 chemins”
Isotry Mpanendaka efa-dahy no voasambotry ny polisy
Mpanendaka 04 mirahalahy no voasambotry ny polisy nanao fisafoana omaly tokony tamin'ny 07 ora sy sasany maraina teny amin'ny tetezan-dramala.
Ambanja Rongony 5,1 taonina no tratra
Rongony milanja 5 taonina sy 100 kg no tratra nodorana tao amin’ny distrikan’ Ambanja ny12 novambra lasa teo.
Delegasionin’ny ekipa Tanzanianina Miisa 8 be izao no tratry ny coronavirus
Araka ny serasera nataony tao amin’ny tambajotran-tseraserany omaly alahady, nitaraina ny Federasionina Tanzanianina momba ny baolina kitra fa tonga hatrany anaty hotely misy ireo mpilalao tanzaniana Taifa Stars
Vondrona Panorama “Tsisy fifidianana azo alefa eto raha tsy…”
Tanteraka tetsy amin’ny Hotely Carlton ny sabotsy 13 novambra teo ny famelabelarana narahina adihevitra notarihin’ny Vondrona Panorama, notarihin-dry Roland Ratsiraka, Rachidy Mohammed, izay nosalorana ny anarana :
Apost sy Kiaka Hiara-hankalaza ny faha 35 taona
Revy rock lehibe ho famaranana ny faha 35 taona niakaran’izy ireo an-tsehatra no ho entin’ny tarika miisa 2
Resaka famonoana omby Nifampitory izy mianadahy mpiraitampo
Mpiraitampo iray kibo no nifampitory noho resaka nobo vono ombivavy tany Anjagnoveratra Antsampanamahazo distrikan’i Sambava, ny herinandro lasa teo.
Ady amin’ny coronavirus Vaksiny Janssen 302 400 fatra indray no tonga omaly
Nigadona omaly 14 novambra maraina teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny vaksiny Janssen miisa 302.400 fatra avy amin'ny "Mécanisme AVAT"
Erick Manana Namarana ny seho 2021 eto Madagasikara
Nafana ny fiarahana tetsy amin’ny CC ESCA ny takarivan’ny zoma teo niaraka tamin’ny mpanakanto mpivoy Ba gasy, Eric Manana sy Feo gasy ary Bebey sy Benny.
Wada sy Yoongs Hanafana tolo-tanana etsy amin’ny Le Pavé
Ny 19 novambra izao indray no fotoana iarahana amin’ny mpanakanto, Wada sy Yoongs, etsy amin’ny Le Pavé Antaninarenina manomboka amin’ny 8 ora sasany alina
Toe-draharaham-pirenena Samy miomana amin’ny sakoroka 2023…
Tandindon’ny toe-draharaha mety hiseho amin’ny taona 2023 izay hiatrehantsika ny fifidianana Filoham-pirenena ny zava-miseho ara-politika amin’izao fotoana izao.